Weerarkii Alshabaab oo lasoo af jaray +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weerarkii Alshabaab oo lasoo af jaray +SAWIRRO
Wasaaradda Amniga ee Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in la soo afjaray weerarradii ay maleeshiyo ka tirsan Alshabaab ku qaadeen madaxtooyada iyo xarunta NISA ee KM 0.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga C/casiis Xildhibaan ayaa saxaafadda u sheegay in ciiiamada ammaanka ay soo afjareen weerarkii ay Alshabaab oo la dilay dhammaan dableydii Alshabaab oo ahaa shan qof.
Wararka ayaa sheegaya in dhammaan dableydii Alshabaab ay dhinteen, kuwaasoo kala ahaa 5 qof oo midkood isku qarxiyay Iridka laga galo madaxtooyada iyo meydadka saddex dabley ay oo lagu dilay dagaal dhex maray ciidamada, iyadoo dableyga kale la sheegay inuu ku dhintay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee ka dhacay Km 0, agagaarka xarunta Ciidamada NISA ee Habar Khadiija.
Weerarka Alshabaab ayaa socday muddo saddex saacadood ah, iyadoo xaaladda magaalada ay mar kaliya isu bedeshay mid kacsan markii qaraxyo iyo rasaas waaweyn ay ka qarxeen dhismooyinka ku wareegsan xarunta Madaxtooyada.
Qarixii KM 0 ayaa waxaa ku dhintay 18 qof, halka 20 kale ku dhaawacmeen, waxaana qasaaraha labada qarax iyo weerarka la sheegay inuu gaaray 28 dhimasho iyo 30 dhaawac ah. Dadka dhintay waxaa ka mida askari ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada oo magaciisa lagu soo gaabiyey Bishaar.